स्पिनल्स - इतिहासको एक बिट - उच्च गहना सपना
इतिहासका बिट्स र स्पिनललाई देखाउने केही उत्कृष्ट कृतिहरू - जुन मणिलाई रूबी भनेर गलत मानिन्थ्यो।
1783 सम्म, रातो र गुलाबी स्पिनहरू माणिक संग भ्रमित थिए। स्पिनलहरू राम्रा गुलाबी रत्नहरू भनेर चिनिन थाले पनि, मानिसहरू अझै पनि तिनीहरूलाई "बालास" वा "बालाइस" माणिक भनेर चिन्छन्। यो शब्द अफगानिस्तानको उत्तरमा रहेको प्रान्त बदख्सानको पुरानो शब्दबाट आएको हो, जहाँ खानीहरू थिए।
यी कुह-इ-लाल ('रातो पहाड') खानीहरू 1 शताब्दी ईस्वीदेखि ठूला स्पिनलहरूको संसारको प्राथमिक स्रोत थिए। मार्को पोलो (c.1254-1324) ले कसरी "राम्रो र बहुमूल्य बालास माणिकहरू" राजाको लागि मात्र खनेको वर्णन गर्नुभयो। राजा आफैं सम्पूर्ण आपूर्तिको स्वामित्वमा थिए, र उसले यसलाई अन्य राजाहरूलाई श्रद्धांजलि वा "मैत्री उपहार" को रूपमा पठाउने थियो।
मुगल सम्राटहरू र तिनीहरूका पुर्खाहरू, तिमुरिडहरूले ठूला कुह-इ-लाल स्पिनलहरूलाई तिनीहरूको सुन्दरता र सुरक्षात्मक तावीजको रूपमा मूल्यवान गर्थे। नतिजाको रूपमा, रत्नहरू काट्नुको सट्टा पालिश गरियो। यसबाहेक, यिनीहरूले प्रायः शासकहरू र राजाहरूको सम्झनामा नामहरू लेखेका थिए।
मा भिक्टोरिया र अल्बर्ट संग्रहालय लन्डन मा संग्रह, क्यारो स्पिनल जसमा सम्राट जहांगीर, शाहजहाँ र औरंगजेबको नाम लेखिएको छ ।
कालो राजकुमारको रुबी
युरोपेली शाही खजानामा प्रवेश गर्ने सबैभन्दा शानदार मुगल स्पिनलहरू मध्ये एक हो। "ब्ल्याक प्रिन्स रुबी"। मणि एउटा ठूलो न काटिएको रातो स्पिनल हो जुन पेड्रो द क्रुएलले 1367 मा ब्ल्याक प्रिन्सलाई दिएका थिए। ब्ल्याक प्रिन्सको रुबीले एगिनकोर्टको युद्धमा हेनरी वीको हेलमेटलाई सजाएको थियो। यो अब बेलायती मुकुट रत्नहरूमा इम्पीरियल स्टेट क्राउनसँग सम्बन्धित छ।
361-क्यारेट "तैमुर रुबी", ब्रिटिश मुकुट रत्नहरूमा पनि, सुल्तान साहिब किरान र रञ्जित सिंह, "पंजाबको सिंह" को संग्रहमा थियो। सन् १८५१ सम्म रुबी मानिने, तैमुर रुबीले आफ्ना पाँच अघिल्ला मालिकहरूको नाम लेखेको छ। 1851 मा तैमुर रुबी लन्डन मा महान प्रदर्शनी मा प्रदर्शन मा थियो र त्यसपछि स्पिनल को रूप मा पुन: वर्गीकृत। महान् प्रदर्शनी बन्द भएपछि, ईस्ट इण्डिया कम्पनीको निर्देशक अदालतले रानी भिक्टोरियालाई उपहारको रूपमा रत्न प्रदान गर्यो। यो उनको निजी स्वामित्व बन्यो, द्वारा हार मा सेट R. & S. Garrard & Co, लन्डन, 1853 मा।
नेकलेसको केन्द्रमा रहेको 'तैमुर रुबी' (एक स्पिनल) शाहजहाँ लगायत धेरै मुगल सम्राटहरूको थियो, र नम्बर 224-5 जस्तै 1849 मा लाहोरबाट आएको थियो। यो नेकलेस कोह-इ-नुरलाई वैकल्पिक रूपमा लिनको लागि डिजाइन गरिएको थियो। केन्द्रविन्दु, रानी भिक्टोरियाको लागि बनाइएको।
थप महत्त्वपूर्ण स्पिनल रत्नहरू
19 औं शताब्दीको दौडान, स्पिनल काट्नेहरूले तिनीहरूको नाजुक गुलाबको रंग र पारदर्शितालाई उत्कृष्ट रूपमा प्रयोग गर्न युरोपेली आदर्शहरू पछ्याए। 19 औं शताब्दीमा माउन्ट गरिएका महत्त्वपूर्ण स्पिनलहरू समावेश छन् आशा Spinel, 50.13 क्यारेट तौल भएको र सेप्टेम्बर 2015 मा बोनहम्स, न्यू बन्ड स्ट्रिटमा बेचेको, म्युनिख ट्रेजरीमा रानी थेरेसका "रुबी" रत्नहरू र "बग्रेसन" गहनाहरू, अहिले ड्युक अफ वेस्टमिन्स्टरको संग्रहमा छन्।
के तपाइँ स्पिनलहरू सङ्कलन गर्ने बारे थप जान्न चाहनुहुन्छ? त्यसपछि बोनहम्सको वेबसाइटमा जानुहोस् र पढ्नुहोस् "101 सङ्कलन - स्पिनलहरू".
० मा टिप्पणीSpinels - इतिहास को एक बिट"
हो स्पिनल बारे थप जान चाहन्छु, जानकारी साझा गर्नुभएकोमा धन्यवाद।
erastyle.in मा हाम्रो नवीनतम गहना संग्रह जाँच गर्नुहोस् र हाम्रो मनपर्ने डिजाइनहरू छान्नुहोस् थप सुन्दर र नवीनतम संग्रहको लागि हाम्रो वेबसाइट erastyle.in मा जानुहोस्।